ज्योति विकास बैंकको साधारण सभा हुँदै, सभामा के-के प्रस्ताब पेस गर्दै ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » ज्योति विकास बैंकको साधारण सभा हुँदै, सभामा के-के प्रस्ताब पेस गर्दै ?
काठमाडौँ - ज्योति विकास बैंकको साधारण सभा आज हुँदैछ । सभा राष्ट्रिय सभागृह प्रदर्शनी मार्गमा ११ बजेदेखि सुरु भएको हो । बैंकले साधारण सभामा सेयरधनीलाई १०% (२२ करोड ६३ हजार ४२० रुपैयाँ) बोनस सेयर दिने प्रस्ताव पेश गर्दैछ । यसैगरी, हालै ज्योतिले एक्वायर गरेको राप्तीभेरी विकास बैंकका सेयरधनीले भने ६% मात्र बोनस सेयर पाउने छन् । बैंकले तत्कालीन राप्तीभेरीको सञ्चालक समितिले पारित गरेको वित्तीय विवरणका आधारमा राप्तीभेरीका सेयरधनीलाई ६% बोनस सेयर दिने प्रस्ताव साधारण सभामा पेश गर्न लागेको हो ।
यस्तै, बैंकले जारी पुँजी तथा चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने विशेष प्रस्ताव साधारण सभाको एजेन्डा छ । साधारण सभाका लागि बैंकले पुस १६ देखि आइतबार (पुस ३० गते) सम्म बुक क्लोज गरेको छ । पुस १५ गतेसम्म कायम सेयरधनीले मात्र बोनस पाउनेछन् । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ज्योति विकास बैंकले ४ करोड ५२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । यसको प्रतिसेयर आम्दानी ८ रुपैयाँ २१ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ १२३ रुपैयाँ १८ पैसा छ ।